Yemafashama akatungamira mwenje, ndeupi musika watinotengesa? - WOSEN Led Fixture, China Fekitori, Mutengesi, Mugadziri, mutengesi
» Blog » Yemafashama akatungamira mwenje, ndeupi musika watinotengesa?
Yemafashama akatungamira mwenje, ndeupi musika watinotengesa?
Kune vakawanda mhiri kwemakungwa vakatungamira mwenje vatengi, vanowanzosarudza yakachipa uye yakanaka mafashama mwenje kubva Chinese yakatungamira mwenje Mutengesi.
Uye ndeupi musika watinowanzo tengesa? akatungamira mafashama mwenje panze UK , saiti yakatungamira mafashama mwenje USA, akatungamira zvigadzirwa India uye kunze kwakatungamira mafashama mwenje Canada tiri yedu inopisa inotengesa mwenje chigadzirwa. Kuti tiite kuti vatengi vedu vavimbe, tinovagadzira dhizaini nyowani kwavari, uye zvigadzirwa zvedu zvinosimbiswa neEC, RoHs, UL, Energy Star, BIS zvichingodaro.
Chero mibvunzo nezve kuvheneka musika we akatungamira mafashama mwenje mutengesi Chinese, kana chero gadziridzo yemafashama dhizaini? Unoda here yakaderera mutengo uye yemhando yepamusoro mafashama mwenje kubva China mutengesi Uya tibate!